“Ndakatarisa Zvisikwa Zvacho Zvipenyu”
BHOKISI REKUDZIDZISA 4A
Ezekieri anofanira kunge akamboona zvivezwa zvakakura zvemikono yemombe neshumba zvine mapapiro nemisoro yevanhu, zvakamiswa padzimba dzemadzimambo nepatemberi dzavanamwari zvichinzi zvinochengetedza nzvimbo idzi. Zvivezwa zvakadaro zvakanga zvakazara muAsiriya nemuBhabhironi. Anofanira kunge aishamiswawo sezvaingoita vamwe vese pavaizvitarisa, sezvo zvimwe zvacho zvainge zvakareba mamita angasvika 6. Asi kunyange zvazvo izvi zvaionekwa sezvine simba, aingova matombo akavezwa asina upenyu.
MUKONO WEMOMBE UNE MAPAPIRO NEMUSORO WEMUNHU
Chivezwa ichi chemukono wemombe une mapapiro nemusoro wemunhu chaiva pagedhi remasvingo eguta rekuAsiriya rainzi Khorsabad. Chivezwa ichi chainzi chaiita kuti mweya yakaipa isapinda muguta.
Asi zvisikwa zvina zvakaonekwa naEzekieri muchiratidzo zvaiva “zvisikwa zvipenyu.” Uyu musiyano wakakura chaizvo! Ezekieri akashamiswa nezvaakaona zvekuti akataura mashoko ekuti “zvisikwa zvipenyu” ka11 mumashoko ake ekusuma uprofita hwake. (Ezek. 1:5-22) Kuona chiratidzo chezvisikwa zvipenyu zvina zvaifamba pamwe chete zviri pasi pechigaro chaMwari cheumambo kunofanira kunge kwakanyatsobatsira Ezekieri kuona kuti Jehovha ndiye anotungamirira zvinhu zvese zvakasikwa. Mazuva ano, chiratidzo ichi chinonyatsotibatsira kuona ukuru hwaJehovha uye simba rake uye kushamisa kweuchangamire hwake.—1 Mak. 29:11.
Chitsauko 4, ndima 4
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ndakatarisa Zvisikwa Zvacho Zvipenyu”